६ महिना भित्र बिभिन्न कन्ट्रक्सनहरुको ७ वटाभन्दा बढी पुल भाँच्चिए अनि पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मात्र कार्वाही ? - Birgunj Sanjal६ महिना भित्र बिभिन्न कन्ट्रक्सनहरुको ७ वटाभन्दा बढी पुल भाँच्चिए अनि पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मात्र कार्वाही ? - Birgunj Sanjal६ महिना भित्र बिभिन्न कन्ट्रक्सनहरुको ७ वटाभन्दा बढी पुल भाँच्चिए अनि पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मात्र कार्वाही ? - Birgunj Sanjal
६ महिना भित्र बिभिन्न कन्ट्रक्सनहरुको ७ वटाभन्दा बढी पुल भाँच्चिए अनि पप्पु कन्ट्रक्सनलाई मात्र कार्वाही ?
९ आश्विन २०७६, बिहीबार १६:२३
वीरगन्ज । २०७६ वैशाख १ गते गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकास्थित बडीगाढ खोलामा बनिरहेको पक्की पुल भाँचियो र ५ जना घाइते भए । ५ करोड १७ लाखको ठेक्कामा बनाउन सुरु गरिएको ५८ मिटर लामो पक्की पुल ढलान गर्ने क्रममै भाँचिएको थियो ।
ठेकेदार वाइपी जनबुद्ध निर्माण सेवा, काठमाडौंले ठेक्का पाएको पुल समयमै निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा म्याद थपेर काम हुँदै गर्दा पुल खोलामा खसेको हो । नयाँ वर्षकै दिन यस्तो घटना भएपछि सरकारले निर्माणाधीन पुलहरुको गुणस्तरबारे विचार गर्ने अवसर र शिक्षा पाएकै थियो । तर, यो वर्ष एकपछि अर्को पुल भाँचिने क्रम जारी आजको अनलाईन खबरमा समाचार छ ।
गत वैशाखमा नै मदन भण्डारी लोकमार्गको हेटौंडा-सिन्धुली-चतरा खण्डमा निर्माणाधीन पक्की पुलले पनि त्यस्तै नियति बेहोर्‍यो । लोकमार्गको पश्चिमखण्ड तर्फको मरिण गाउँपालिका-२ ठूलो गर्दुवा खोलामा बनिरहेको पुल बाढीमा विलिन हुन पुग्यो । अनक कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको ६० मिटर लामो पुलको बीच भाग भास्सिएको थियो ।
असार पहिलो साता मनाङ जोड्ने म्यार्दी खोलाको बेलिब्रिज बाढीले बगायो । अघिल्लो वर्ष मात्र निर्माण सकिएको पुल बाढीले बगाएपछि लमजुङ र मनाङबीचको सम्पर्क असहज छ । सडक निर्माण भएको १० वर्षपछि हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने गरी म्यार्दी खोलामा बेलिबि्रज बनाइएको थियो । तर, त्यसको आयू एक वर्ष पनि रहेन ।
असारमै धनुषामा अर्को पुलले त्यही नियति खेप्यो । बटेश्वर गाउँपालिका-५ स्थित औरही नदीमा निर्माणाधीन पुल पनि बाढीले बगायो । सखुवा महेन्द्रनगर र शान्तिपुर जोड्ने औराह नदीमाथिको पानीको बहाब थेग्न नसकेर पुल भत्कियो । ६ वर्षअघिबाट निर्माण सुरु भएको पुलमा ठेकेदार रोशन कन्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो । असारको बाढीले त्यसलाई पुष्टि गर्दै पुलको केही भाग नै बगायो ।
असारमा फेरि सोही प्रकृतिको अर्को घटना भयो । मनाङमा मर्स्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल नदीमै खस्यो । मनाङ-ङस्ियाङ गाउँपालिकाको हुम्डे र ङावल जोड्ने पुलको ढलान मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा खसेको थियो । गाउँपालिकाका अनुसार एक महिनाअघि नै सो पुल बांगो देखिएको थियो ।
गत साउन अन्तिम सातामा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको खडक पुल पनि बन्दाबन्दै भत्कियो । बोदे बरसाइन नगरपालिका-५ जाँजरस्थित खडक नदीमा बागमती निर्माण सेवाले बनाइरहेको पुल ढलानकै क्रममा बाढीले भत्काएको हो ।
भदौमा रौतहटमा पनि निर्माणाधीन पुल भाँच्चियो । गौर नगरपालिका-४ गढवामा निर्माण सकिनै लागेको पुल बीच भागबाटै भाँचियो । कन्काई इन्टरनेसनल बिल्डर्सले झण्डै ६ करोड लागतमा बनाइरहेको यो पुल ४० मिटर लामो हो । २०७६ भदौमा सक्नुपर्ने पुलको ८० प्रतिशत काम सकिएको त थियो, तर सवारी चलाउनै नपाई पुल खोलामा खस्यो ।
‘हामीले विभागकै इन्जिनियर र ठेकेदारहरुलाई तालिम दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगका क्रममा केही घटना भएका छन् । यसले अरुलाई सचेत पनि बनाएको छ ।’yatradaily